August 2, 2019 August 3, 2019 Kiran Kumar
खुल्ला आँखाले पनि सबथोक देख्न सक्दैन । आँखाभन्दा पर पनि संसार छ । र त्यो तपाईले देखे/सोचेभन्दा भिन्न छ । सानोमा पिट्टु, डन्डिबियो खेल्दा संसार भनेको त्यही हो, त्यो बाहेक अरू केही हुन्न, संसार नै त्यति मात्र हो लाग्थ्यो । Read More …
Postkirrkur, social life, social media, wordsLeaveacomment
July 6, 2019 July 6, 2019 Kiran Kumar
जीवनको गन्तव्य कहाँ हो ?
– आर्यघाट ।
आर्यघाट नै किन ?
– शान्त छ नि त ।
कहिले जानु पर्छ ?
– चाहा गर्नुहुन्छ भने आजै ।
Postaaryaghat, answer, death, life, question, thoughtsLeaveacomment
कथा कसरी लेख्ने ? ~रुमन न्यौपाने~ १.कथाको बारेमा विषयको खोजी २.बिषय सुहाँउदो चरित्रको पुर्ननिमाण३.कथाको लम्बाई को बारेमा पुर्नसोच४.कथा बाचन शैली र कथा कसलाई भन्न लगाउने ५.कथाको सुरुवाती बिन्दु र अन्तिम बिन्दुको तय६.कथाको समय निर्धारण/रचना ७.पात्रहरू बिचको संभाषण शौलि र बाक्यहरूको पूर्व निमार्ण८.सोचाइको अन्तिम Read More …
Poststory, story writingLeaveacomment
नेपालीको चारवटै हातमा लड्डु तर नेपालीसँग दुईवटाभन्दा हात छैन । क्या गजबको मसला पस्कन्छन् सामाजिक सञ्जालमा । प्रसङ्ग सरकारले जापानसँग कामदार पठाउन गरेको सम्झाैता । उता मलेसियाको रोजगारी पनि खुलाउनै लागेको छ सरकारले, कोरीया जान फर्म पनि खुलेको छ, देशमै Read More …
साँझ परिसकेको थिएन । तर पनि घाम थिएन । कारण थियो, आकाशमा मडारिरहेका काला बादल । माइक्रोबाट रत्नपार्क झर्दा आकाश पनि झर्न थालिसकेको थियो । पानिका थोप्ला ठुला–ठुला थिए । र सङ्ख्या पनि बढ्दै थिए । मलाई सुन्धारा पुग्नु थियो Read More …